Page3– MySansar
प्रकाश सपुतको ‘पिर’ले अइय्या अइय्या हुनेहरुलाई चार टिप्स
Posted on March 13, 2022 March 14, 2022 by Salokya
एमसीसीपछि पल शाहको पालो आएको थियो। पलपछि अब प्रकाश सपुतको ‘पिर’ अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। ‘पिर’ एउटा सामान्य गीतको म्युजिक भिडियो मात्र रहेन, यो ठीक छ कि ठीक छैन भन्ने पिर गर्दै देशै लागेपछि यो अब गम्भीर मुद्दा बन्न पुग्यो। माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई पिरले पर्नु पिर पारेको छ। माओवादी र उनीहरुको सशस्त्र… Continue reading
पल शाह प्रकरणमा अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ?
Posted on March 6, 2022 March 6, 2022 by Salokya
अपडेट : आज तनहुँ जिल्ला अदालतले पल शाहलाई थप १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान दिन अनुमति दिएको छ। यसअघि गएको आइतबार ७ दिनको म्याद दिइएको थियो भने अहिले थप १२ दिन दिइएको हो। पल शाह प्रकरणमा युट्युबमा अझै मिथ्या सूचनाहरु आउने क्रम रोकिएको छैन। शुक्रबार एकै दिन प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग, नेपाल प्रहरीको साइबर… Continue reading
कम्प्युटरले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको धोका
Posted on March 2, 2022 March 2, 2022 by Salokya
एकै दिन राजनीतिक पार्टीहरुको दुई वटा विज्ञप्तिमा ‘सिल्ली मिस्टेक’ हुनु दुर्लभ हो। तर शिवरात्रीको दिन त्यसो भयो। विज्ञप्ति त तत्काल सच्याउन धेरै गाह्रो भएन। तर अहिले सोसल मिडियाको जमानामा एक मिनेट मात्रै गलत विज्ञप्ति इन्टरनेटमा रहे पनि त्यो मेट्न गाह्रै पर्छ। तुरुन्तै फैलिहाल्छन् यस्ता विषय।
पल शाह प्रकरणमा जेल जान रहर गर्नेहरु
Posted on February 27, 2022 February 27, 2022 by Salokya
गएको बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका पल शाह आज आइतबार बल्ल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन बाध्य भए। यो बीचमा कानुनसँग लुकेर उनले फेसबुके, युट्युबे र टिकटके अदालतमा अडियो सहितका ‘प्रमाण’ राख्दै बहस छेडेका थिए। तर यो क्रममा जजसले पीडित किशोरीको नाम, फोटो र परिचय खुल्ने काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले नबुझेको कुरा के हो भने… Continue reading
फेक न्युज बारे ब्लग लेख्दा झण्डै साइबर ब्युरोको थुनामा परियो
Posted on February 23, 2022 February 24, 2022 by Salokya
तपाईँले यो के लेख्नुभएको? तपाईँलाई यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो? यस्तो लेख्न पाइन्छ? साइबर ब्युरोका डिएसपी प्रदिन ताम्राकारको एकोहोरो थर्काइ जारी थियो। मैले ‘हेर्नुस् न त्यहाँ के लेखेको छु, यस्तो यस्तो फेक न्युज आयो भनेर तपाईँहरुलाई सहयोग हुने गरी नै लेखेको छु त’ भनेर बुझाउनु खोज्छु, बुझे पो। दर्ता नगरी किन चलाउनु भएको? यस्तो लेख्ने… Continue reading
एमसीसीको बहानामा मनमा लागेका कुरालाई ‘फेक न्युज’ बनाएर पत्रकारिताको बदनाम गर्नेहरु
Posted on February 21, 2022 by Salokya
एमसीसीको विषयले समाजलाई कसरी ध्रुवीकृत बनाइसक्यो, त्यो अहिले छर्लङ्ग भइसक्यो। तर एमसीसीको मूल मुद्दासँगै योसँगै जोडिएका मिथ्या सूचनाहरुले पनि मान्छेको दिमाग भुटिरहेको छ। सर्वसाधारण एमसीसीका कुन सही कुरा हो, कुन मिथ्या- थाहा पाउनै नसकिने गरी अलमलमा छन्। लिडर र ओपिनियन लिडरहरुले यस्तोमा गाइड गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरु आफै द्वैध चरित्र देखाउँदै छन्। यही मौकामा एमसीसीको… Continue reading
मन्त्री आलेको अडियो यसरी भएको रहेछ भाइरल
Posted on February 15, 2022 February 15, 2022 by Salokya
आज धेरैले बिहान उठ्ने बित्तिकै फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जताततै प्रेम आले नै प्रेम आले देखे। अनि अलि खोज्नेहरुले एउटा भिडियो पनि देखे जुन सबैका अगाडि सुन्न नसकिने खालको थियो। मुख छाडेर गाली गरिएको यो भिडियोको आवाज आले कै हो र भन्ने शंका पनि उनको सचिवालयलाई नै कोट गरेर आएको समाचार पढेपछि प्रष्ट हुने नै भयो।… Continue reading
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता, अबको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ
Posted on February 13, 2022 February 13, 2022 by Salokya
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आजै यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा आज बिहानसम्म कुनै मिडियामा वा हल्लामा पनि चुहिएको थाहा थिएन। अकस्मात् बिहान साढे ११ बजेतिर यस्तो खबर मिडियामा आयो। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जीवनराम श्रेष्ठ… Continue reading
श्रद्धाञ्जलि लेख्दै समाचारमा पोस्ट भएको आफ्नो फोटो हटाउन एक युवतीले भोगेको हैरानी
Posted on February 5, 2022 February 1, 2022 by Salokya
आफ्नो फोटो कुनै वेबसाइटमा ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जलि’ लेख्दै पोस्ट भएको देख्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्ला ? अझ एउटा होइन, दुइटा होइन, अनेक वेबसाइटमा अनि टिकटकमा पनि आफ्नो फोटो मृत्यु भएको समाचारसँग जोडेर राखेको देख्नुभयो भने झन् कस्तो होला ? तपाईँले त्यस्तो अहिलेसम्म भोग्नुभएको छैन, त्यसैले त्यस्तो बेला कस्तो होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। तर सृष्टि खड्काले केही… Continue reading
अमेरिकालाई गाली गर्नु पर्दा हाम्रा नेताहरुले पूँजीवादी भनेर सत्तोसराप गर्छन्। त्यही भएर सबै दलहरुले मिलेर हाम्रो नेपालको नयाँ संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख’ लेखेका छन्। यस्ता राजनीतिक वादहरुसँग सर्वसाधारणलाई मतलब हुँदैन। जुनै वाद भए पनि सजिलो हुनुपर्‍यो। अहिले कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा त्यही पूँजीवादी अमेरिका र हाम्रो समाजवादउन्मुख नेपालको फरक हेरौँ।